Real Madrid oo ku guulaysatay Horyaalka Spain - BBC News Somali
Real Madrid oo ku guulaysatay Horyaalka Spain
Image caption Cristiano Ronaldo ayaa 9-kii ciyaar ee ugu dambeysay waxa uu Real Madrid u dhaliyay 14 gool
Real Madrid ayaa ku guulaysatay horyaalkii ugu horreeyay ee La Liga tan iyo 2012-kii, iyadoo guushanna ay gaartay ciyaartii ugu dambeysay xagaagan ee ay la yeelatay kooxda Malaga.
Ciyaarta ayaa waxa ay ku soo gebagabowday 2-0 oo ay ku badisay kooxda Real Madrida oo Malaga marti u aheyd.
Cristiano Ronaldo ayaa bilowgii ciyaartaba gool u dhaliyay kooxdiisa kaddib markii uu baas dhex ka dhiib ah uu u soo dusiiyay ciyaaryahan Isco kaddibna Ronaldo si fudud shabaqa ugu hubsaday.
Qeybtii labaad ee ciyaarta ayaa waxaa Real goolka labaad u dhaliyay Karim Benzema, oo lugta la helay kubad uu soo tufay goolhaye Carlos Kameni.
Real Madrid ayaa kulanka xalay u baahneyd hal dhibic oo keliya, si ay u qaado horyaalka, waxaana ay 3-da Juun fiinaalka koobka horyaallada Yurub ay la dheeli doontaa kooxda Juventus.
Barcelona oo horyaalka La Liga ku guulaysatay labadii xilli ciyaar ee lasoo dhaafay, ayaa 4-2 uga adkaatay kooxda Eibar, balse waxay u baahneyd in Real Madrid laga badiyo si ay usii haysato koobka.
Natiijadan ayaa ka dhigan in tababare Zinedine Zidane uu yahay macallinkii ugu horreeyay ee xilli ciyaareedkii ugu horreeyay ee uu si buuxda Real u maamula, kooxdaasi u qaaday horyaalka Spain ee La Liga, tan iyo markii uu sidan oo kale sameeyay shan sano ka hor tababare Jose Mourinho.
Haddii Real Madrid ay kaga adkaato Juventus fiinaalka ka dhici doona magaalada Cardiff, waxay noqonaysaa kooxdii ugu horaysay ee difaacata koobkaasi, ayadoo uu koobkii hore Zidane u qaaday kooxda Real Madrid lix bilood un kaddib markii uu noqday tababaraha naadigaasi.
Image caption Zinedine Zidane ayaa ku guulaystay Horyaalka Spain ee La Liga, Champions League waxayna gaartay finaal kale 18-kii bilood ee ugu horreeyay ee uu tababaraha ahaa
Image caption Real Madrid ayaa qorshaynaysa inay dib ugu laabato caasimadda si ay halkaa ugu dabaaldegto habeenka Axadda ah
Weligaa haka shakin awoodda Real Madrid
Image caption Shaxda kala horreynta Horyaalka Spain ee La Liga
Zinedine Zidane ayaa sanad iyo barkii ugu horreeyay ee uu tababaraha u ahaa kooxdaasi Real Madrid, waxa uu la qaaday horyaalka La Liga, koobka Horyaallada Yurub, waxaana uu gaaray fiinaal kale oo Horyaalllada Yurub ah.
Kooxda macallin Zidane ayaa lagu tilmaamay in inta badan xilli ciyaareedka hadda dhammaaday ay ahayd tan ugu wanaagsan Spain iyo weliba Yurub.
Naadigaasi ayaa hadda u muuqda mid aan si weyn ugu tiirsaneyn saddexda laacib ee kala ah Benzema, Ronaldo iyo Gareth Bale, inkastoo labada hore ay goolasha u dhaliyeen kulankii xalay ee Malaga.
Isco iyo Alvaro Morata ayaa muujiyay in ay yihiin laacibiin tayo leh marka fursad la siiyo.
Markii ay Barcelona ka adkaatay Real Madrid 23-kii Abriil, ayaa waxaa dib usoo noolaaday rajada ay kooxda Catalonia ka dhisan ka qabto difaacashada horyaalka, balse Real Madrid ayaa badisay dhammaan lixdii kulan ee ugu dambeysay, iyadoo horyaalka ku qaadday saddex dhibcood.
Malaga ayaa abuurtay fursado wanaagsan oo ay goolal ku dhalin kartay, waxaana ciyaarta si weyn uga dhex muuqday weeraryahankeeda Sandro oo horay Barcelona ugu ciyaari jiray, balse kooxdaasi uma aanay muuqan mid ka adkaan karta Real Madrid.
Image caption Cristiano Ronaldo, Fabio Coentrao and Pepe ayaa sawir wadagalay kaddib ciyaarta